अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठको आज जन्मदिन, कति बर्षमा लागिन उनि ? भन्छिन् – मेरो आयू सकिएको छैन – Sandesh Press
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठको आज जन्मदिन, कति बर्षमा लागिन उनि ? भन्छिन् – मेरो आयू सकिएको छैन
June 14, 2021 318
Prevपाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन, असार १ गते मंगलबार, असरको पहिलो दिनको राशिफलमा हेर्नुहोस तपाईको भाग्य कस्तो छ ?
Nextकाठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि जारि भयो सूचना
झापामा आज मात्रै यति धेरै जनाको मृत्यु, बढ्यो सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या
के तपाईलाई ॐ को वास्तविक अर्थ थाहा छ ? शास्त्रमा यस्तो छ
सबैका प्रिय हुन्छन् यी दुई राशीका व्यक्ति, जसले गर्छन् अरुको मनमा सजिलै राज